Momba anay - Hangzhou Dongshen Machinar Engineering Co., Ltd.
Izahay koa dia manamboatra lasitra EPS ho an'ny milina EPS marika hafa avy any Alemana, Korea, Japon, Jordania sns.
Hangzhou Dongshen Machinar Engineering Co., Ltd.
Ny orinasantsika manan-danja iray hafa dia ny tsipika famokarana akora EPS. Manana ekipa matihanina izahay hamolavola ny zavamaniry EPS, hanomezana raikilasy kilasy voalohany amin'ny famokarana vakana EPS, ary hanara-maso ny fananganana tetikasa resina EPS eny an-toerana. Izahay dia manome ny fitaovana rehetra amin'ny famokarana akora EPS, toy ny reactors EPS, tanky fanasan-damba EPS, milina sivana EPS sns. Azontsika atao manokana ny manamboatra fitaovana akora EPS arakaraka ny takian'ny fahaizan'ny client. Izahay koa dia manome ny akora simika amin'ny famokarana vakana EPS, toy ny HBCD, DCP, BPO, mpandraharaha fonosana sns.
Indraindray izahay dia manampy ny mpanjifa hanome ny entana angatahin'izy ireo. Noho ny fahamarinanay sy ny andraikitray dia mpanjifa maro no niara-niasa taminay nandritra ny folo taona mahery. Matoky antsika tokoa izy ireo, ka raisin'izy ireo ho toy ny biraony any Sina izy ireo. Manampy azy ireo izahay hahita mpamatsy tsara ary hanao fanaraha-maso kalitao ho azy ireo rehefa mahatsapa ho sarotra amin'ny dia izy ireo. Manantena hatrany ny fiaraha-miasa maharitra izahay, ary mankamamy ny fifandraisana amin'ny mpanjifa tsirairay.